विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिले कानूनकै खिल्ली उडाउँदा सांसद्हरू टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?
अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, कार्तिक २, २०७३
राधेश्याम अधिकारी, सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता
आज विशेष समय लिएर विशष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष हैन ग्लानिको अनुभव भइरहेछ । विस्तार विस्तार राज्य असफल हुने सम्भावनातिर गइरहेको महसूस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनी काखी बजाउनेहरूको हर्षको सीमा छैन । जति कानून मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ ।
कानूनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त समेत नबुझ्ेकाहरू यस मुलुकको संवैधानिक पदमा विराजमान छन् र त्यस्ताले कानूनी राज्यको अवधारणालाई दिएका चुनौती छापा, अनलाइन खबर, टेलिभिजन, रेडियो सबैजसो सञ्चारमाध्यममा सचित्र प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका छन् । तर पनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडि नतमस्तक छ र गणतान्त्रिक नेपालमा कानून भन्दामाथि पनि कोही व्यक्ति हुनसक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाहित भइरहेछ ।
मैले उठाउन लागेको कुरा वैयक्तिक हुँदै हैन । कुनै व्यक्ति कानूनलाई नमानेर बस्न सक्छ, कानूनलाई अटेर गर्न सक्छ, तर राज्यका अंगहरू काम गर्न नसक्ने भए, ती असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरूको संरक्षण कसरी हुने हो ? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो ।
आज महीना दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला अवज्ञा भएको छ, कानूनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चारमाध्यम बाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ । यो सबैले बुझन जरूरी छ निर्धालाई अदालत चाहिन्छ ।
दुःखका बेलामा यो संसद्मा उपस्थिति धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानूनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ । तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिंड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने ? मूल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्रा अगाडि विकल्प छँदै छैन । न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने, नबनाउने ? यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने, नदिने ? कानूनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने ? यो मात्रै विकल्प छ ।
आज जे देखिइरहेको छ त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुख बीचको झ्न्झ्ट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नु भनेको यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झ्नै आपत्तिजनक विषय ठहर्नुपर्ने हो । यसलाई यो संसद्ले गम्भीरतासाथ लेओस् भन्ने मेरो सबै माननीय सभासद्ज्यूहरूमा आग्रह छ, अनुरोध छ । अदालतको गरिमा जोगिनुपर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
संवैधानिक पदका पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिंदैन । संविधानले दिएको त्यो विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानूनकै खिल्ली उठाउँदा पनि हामी सांसद् र संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मेरो विचारमा मिल्दैन ।
आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्नुपरेको छ– अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ । त्यसो हो भने संसद्लाई अख्तियार प्रमुखको सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो ? कति अवधिका लागि उहाँ जानुभएको हो ? विदा कति अवधिको स्वीकृत गराउनुभएको हो ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो ? उहाँ यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो ?
सँगसँगै आज म सम्माननीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाअभियोग समिति समेत पर्दछ, यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन । विगतका जेसुकै कारण भए पनि अब एकक्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाअभियोग समितिलगायतका विशेष समितिहरू तत्काल गठन गरियोस् । यतिबेला म के समेत स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीय सांसद्ज्यूहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध छानबीन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद् सचिवालयमा थन्केर बसेको अवस्था छ ।
कुनै पनि उजुरी माथि छानबीन होस् भन्ने बित्तिकै छानबीनमा परेका व्यक्तिबारे सत्य तथ्य बुझ्ी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति अत्यावश्यक भएको छ । संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु विल्कुलै उचित भएन । तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद् एवं सांसद्हरूको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशीघ्र उक्त समिति बन्ने बनाउनेतर्फ पाइला चालिने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरू कारणले हामीले समाप्त गर्नुपरेको हैन । कानून भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेको हो । त्यो शासन पद्धति स्थापित गर्ने संविधान यसै संसद्मा उपस्थित अधिकांश सदस्यहरूले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो । यस्तो संविधानलाई आज सबैले देख्ने, बुझने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद् चूप लागेर बस्नुहुँदैन । यसको निकासबारे छलफल हुनुपर्दछ । तसर्थ म सम्पूर्ण माननीय सांसद्ज्यूहरूलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न अपील गर्दछु ।
(सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीद्वारा २ कात्तिकमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत मन्तव्य)